Soo -saarayaasha Kayak - Shiinaha Alaab -qeybiyeyaasha Kayak & Warshadda
Paddle Single Kayak Iibinta
Qiyaastii 20% ayaa ka khafiifsan kayk wareega.
Miisaan la mid ah kayk Glassfiber.
Ka xoog badan Glassfiber/KV/kayak Kaarboon.
Taargooyinka isku dhafka ah ee ABS oo lagu shaabadeeyey Akrylic UV-adkaysi u leh, waxay ka dhigi kartaa dusha dhaldhalaalka leh ee kayk-ka wareeggu aanu marna yeelan.
Kaanga Kaaniga ah
Waxqabad aad u fiican ：Dhismaha polyetylen-ka 1-lakabka ah ee la rogay wuxuu bixiyaa isku-darka xoogga iyo iska-caabbinta saamaynta oo inta badan agabyada kale aysan la jaanqaadi karin.
Naqshad gaar ah ： Marka la naqshadeeynayo SeaDog Angler, wax dadaal ah lagama gaarin abuuritaanka waxqabadka ugu wanaagsan ee 295cm / 9'8 `` kayk kalluumeysi fadhi-ku-sarre leh, iyadoo la kordhinayo raaxada iyo xasilloonida.
2 Dadka Kayaking Kalluumaysiga Koowaad
Heerka dambe ee qalabaysan waa laftiisa hal -abuurnimo mudan in la xuso. Kaliya maahan inay bixiso taageero gadaal ka saraysa waxayna wanaajisaa waxqabadka qulqulka laakiin sidoo kale aad bay u fududahay in lagu dhejiyo.
Kalluunka Kalluumeysiga Badda Kayak
Kaykaan polyetylen-ka ah ee aan caadiga ahayn waxaa qaddarinaya kuwa wax-qabad-haraad-doonka ah ee raadinaya kayak rogay oo xoog badan, dhakhso badan, jilicsan, iyo madadaalo leh. Ma jiraan wax badan oo ku xeeran - oo Crunch -ka ayaa waliba eegaya qaybta.
Kayak Kalluumeysiga Doomaha ee Caagga ah
Waxay ku saabsan tahay waxqabad laakiin sidoo kale waxay ku saabsan tahay muuqaalkeeda Wali ma hayno inaan aragno meel ka fiican 11'5 '' oo fadhida kaymaha kalluumaysiga. Raider Angler ayaa laga yaabaa inay tahay doontii ugu fiicnayd ee fasalkeeda maanta suuqa taal.
Doontii Tababarka Kalluumaysiga Badda ee Laba Qof
Doubloon - moodel cusub oo ka yimid Jolly Roger! Kayak tandem -kan is haysta waa mid wax ku ool ah oo deggan 510cm/16'8 ”. Naqshadda markabka waxaa loo hagaajiyaa waxqabad iyo xasillooni labadaba si loogu oggolaado madadaalo iyo waayo -aragnimo badbaado leh kuwa dabaasha.
Tababarka Canoe Kayak Pedales
Sida rada -raadeyaasha Raider -ka oo kale u dhaca muuqaallada Buccaneer -ka. Buccaneer -ku wuxuu u taagan yahay inta badan biyaha. Markay tahay 14'9 ''/450cm doontan maalinlaha ah ee waxqabadka sare leh oo leh awoodaha dalxiiska ee muuqda waa inay lahaataa qof kasta oo raadinaya kayak madadaalo leh wax ka badan kuwa caadiga ah.